महिला र यौन स्वास्थ्य onlinedarpan.com
Friday 1st of July 2022 / 04:39:31 AM
यौन र स्वास्थ्यबारे जानकारी हुन अति आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा यस्ता विषयमा त्यति चासो दिएको पाइदैन । यसको विकाससंगै यौनप्रतिको उत्सुकता बढेर जान थाल्दछ । महिलामा १२-१३ वर्ष र पुरुषमा १४-१५ वर्षदेखि यौन अंगको विकास सुरु भएको पाइन्छ । तर यौनका विषयमा जानकारी र डाक्टरको परामर्श हुनु अति नै आवश्यक छ । यौन एक मनोवैज्ञानिक विषय हो । हामीले हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गरी यौन इच्छा बढाउन वा घटाउन सकिन्छ ।
यौन अत्यन्त गोप्य राख्दा अनेकौं मनोवैज्ञानिक समस्या आउन सक्छ । यसर्थ आवस्यक ठाँउमा कुरा मिल्नेहरुसंग यस विषयमा कुराकानी गर्नु राम्रो मानिन्छ । कुरा शेयर नगर्ने खालका बानी-व्यवहार पुरुष र महिला दुवैमा पाइन्छ । केही पुरुषहरु आफ्ना साथीहरुसंग यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्छन् भने महिलाहरुमा यो अनुपात एकदमै कम हुन्छ । कति नेपाली महिलाहरुलाई त यौन अंग र यसका कामबारे धेरै जानकारी पनि नहुन सक्छ । यौन सुख प्राप्त हुन दुबैको उत्तिकै लगाव र इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ ।
सामान्यतया मन आनन्द हुदाँ मानिसमा यौन चाहना बढ्ने र मनमा तनाव हुँदा यौन चाहना घट्ने हुनु स्वभाविक नै हो । यसर्थ यौनबारे सम्झना गरिरहँदा अर्थात यौनका परिकल्पनाहरुमा मनको तनाव घट्छ । महिलामा यौन चाहना महिनावारीको चक्र अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ तर पुरुषमा त्यस्तो हुँदैन । जतिबेला पनि चाहना बढ्ने वा घट्ने हुन सक्छ । त्यसैले पुरुषहरु हरेक पल कामुक भईरहन्छन् पनि भनिन्छ ।
महिलाहरुका लागि सेक्स गर्नुका निकै फाइदाहरु छन् । के तपाईंलाई थाहा छ, सेक्स गर्नाले महिलाको तौल घट्छ, छाला चम्किलो हुन्छ र मुटुको रोगहरु पनि लाग्दैन । महिलाहरुका लागि सेक्स किन आवश्यक छ । आजको यो अंकमा महिलाहरूलाई सेक्सबाट कति फाइदा रहेछ भन्ने बारे प्रकाश पारेका छौं ।
सेक्सबाट महिलालाई हुने फाइदाहरु
१. नियमित सेक्सले तपाईंको फिटनेस र स्वास्थलाई राम्रो बनाउने गर्दछ । यसले रोगी व्यक्तिहरुलाई रोगसँग लड्न मद्दत गर्दछ र मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ बनाउने गर्दछ ।
२. नियमित सेक्स गर्नाले तापईंको क्यालोरी नष्ट हुने गर्दछ र यसबाट तपाईंको तौल घट्ने गर्दछ । सेक्स एउटा मुटुको व्यायाम पनि हो जसबाट प्रतिघण्टा १७० क्यालोरी घट्ने गर्दछ ।
३. तनावले धेरैजसो महिलालाई आफ्नो शिकार बनाएको हुन्छ । तनावबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सेक्स नै हो । सेक्सको दौरान तपाईंलाई तनाव र डिप्रेसनबाट बचाउँछ किनभने सेक्स गर्दा अक्सिटसिनबाट मुक्ति दिने गर्दछ जुन तनावको लागि जिम्मेवार हुने गर्दछ ।
४. सेक्सले निन्द्रालाई बढाउँछ र अक्सिटोसिनलाई हटाउन मद्दत गर्दछ, जसले निन्द्रा आउन मद्दत गर्छ । यहि कारणले गर्दा पुरुषहरुलाई सेक्स लगत्तै निन्द्रा लाग्ने गर्दछ ।
५. यदि तपाईंलाई कुनै साइड इफेक्ट बिना रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नु छ भने सेक्स गर्नुहोस् । सेक्स गर्ने क्रममा शरिरमा डीएचइए नामक हर्मोन उत्पादन हुने भएका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने गर्दछ ।